Hello Nepal News » शानदार एमबाप्पे : पिएसजीमा पूरा भयो शतक !
शानदार एमबाप्पे : पिएसजीमा पूरा भयो शतक !
काठमाडौं, मंसिर २१
फ्रेन्च क्लब पिएसजीका युवा स्टार केलियन एमबाप्पेले क्लबमा १०० गोलको कोसेढुंगा पूरा गरेका छन् । शनिबार राति उनले लिग वानमा मोन्टेपेलरविरुद्ध १ गोल गर्दै गोलको शतक पूरा गरेका हुन् । पिएसजीले मोन्टेपेलरलाई ३–१ ले हराउँदा एमबाप्पेले दोस्रो हाफमा मैदान छिरेर इन्जुरी समयमा गोल गरेका थिए ।
मात्रै २१ वर्षका फ्रेन्च फरर्वाले १३७ खेल खेल्दै १०० गोल गरेका हुन् । जसमा उनले च्याम्पिन्स लिगमा ३० खेलबाट १३ गोल गरेका छन् भने लिग वानमा ८५ खेलबाट ७४ गोल गरेका छन् । बाँकी गोल अन्य प्रतियोगितामा गरेका छन् ।
पिएसजीले एमबाप्पेलाई सन् २०१७ मा फ्रान्सकै क्लब मोनाकोबाट १६५ मिलियन पाउन्डमा अनुबन्ध गरेको थियो । उनले मोनाकोमा छँदा २७ गोल गरेका थिए । पिएसजीले नेइमार र एमबाप्पेलाई सन् २०१७ मा एकैपटक अनुबन्ध गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति २१ मंसिर २०७७, आईतवार १६:०३